प्रोफाइल | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
भारतीय यी सेलेब्रिटीहरु जसको विवाहमा भन्दा विच्छेदमा बढी खर्च भयो !कस्ले कति रकममा सम्बन्ध विच्छेद गराए ?
सेलेब्रिटीहरू सधैँ चर्चामै रहन्छन् । उनीहरूको प्रेम, विछोड, विवाह र सम्बन्धविच्छेद पनि चर्चाकै विषय बन्छ । केही सेलेब्रिटीका विवाहभन्दा सम्बन्धविच्छेद झन् बढी चर्चामा रहे । कारण, विवाहभन्दा सम्बन्धविच्छेदमा उनीहरूको खर्च बढी भयो । भारतीय तीन अर्बपति सेलेब्रिटी जसको विवाहमा…
को हुन भावी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ? शब्द चित्रमा
नेपालको बामपन्थी आन्दोलनमा शंकर पोखरेल स्थापित नेता हुनुहुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका पोखरेलको बैचारिक र राजनीतिक क्षमता र संगठनात्मक कार्यकुशलतालाई उदाहरणीय मानिन्छ । भारतमा अध्ययनरत छँदा उहाँले प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको नेताको रुपमा…
यसरी भयो सिक्किम भारतमा विलय
६ एप्रिल १९७५ को बिहान सिक्किमका राजा चोग्यालले आफ्नो राजदरबारको गेटबाहिर भारतीय सैनिक ट्रकहरुको आवाज सुने।
उनी दौडिएर झ्यालको छेउमा गए। उनको दरबारलाई चारैतिरबाट भारतीय सैनिकहरुले घेरा हालिसकेका थिए।
त्यही बेला मेसिनगन चलेको…
काठमाडौं उपत्यकामा स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी यसै वर्षमा हामि खुवाउन सक्छौं:- सञ्जिव विक्रम राणा
खानेपानीका विषयमा विज्ञता हासिल गरेका कार्यक्षेत्रमा कर्मठ युवा इन्जिनियर संजिवविक्रम राणाको कुशल व्यवस्थापनमा उपत्यका वासिलाई पानीको सहज आपुर्ति गर्ने काम द्रुतगतिमा अगाडि बढीरहेको छ । तत्कालीन खानेपानी संस्थान, काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौ उपत्यका खानेपानी…
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाको संक्षिपत जीवनी
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकबाट मुलुकको ४०औँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा यो उहाँको चौथो कार्यकाल हो ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाको जन्म २००३ जेठ ३१ गते आसिग्राम–५ रुवाखोला डडेल्धुरामा…
नारायण गुरुको नजरमा ‘नेत्रलाल अभागी’
दाङ । नारायणप्रसाद शर्मा र नेत्रलाल अभागी दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनका जुझारु पात्र हुन् । तर, यी दुई बीच कहिल्यै मित्रता देखिएन, यहाँसम्म कि एकले अर्काको कामप्रति सन्तुष्ट जनाउने ठाउँ देख्दैनन् ।
दलालको फन्दामा पर्दा…‘नर्कबाट छुटकारा पाएँ’
काठमाडौं । रातको एक बजेको थियो । बाँके कोहलपुरकी २० वर्षीया गोमा (नाम परिवर्तन) ले घरको सबै काम भ्याइसकेकी थिइन्। घरको काम सक्दा सधंै रातको एक बज्थ्यो । त्यसपछि उनी सुत्न जान्थिन्। तर, त्यस दिन (२०७३ फागुन १९) उनलाई…
९२ वर्षीय वृद्ध साइकलमा हाट बजार गर्दा सबै चकित
मोरङ । ९२ वर्षको उमेरमा वृद्ध मानिस के गर्ला ? तपाईंलाई कसैले सोध्यो भने सहजै जवाफ दिनु हुन्छ , लौरोको साहारामा भित्र बाहिर गर्छ । अथवा छोरा वा नातिको साहारामा बाँची रहेको हुन्छ । तर उर्लाबारीका ९२…
प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ मन्त्री बीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आज चिनियाँ उद्योग वाणिज्यका लागि राज्य प्रशासनमन्त्री चाङ माओले माओले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री माओको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी सहमतिमा…
बोल्ड व्यक्ति हो वा प्रवृत्ति
काठमाडौं । ‘बोल्ड एन्ड ब्युटीफुल’ र ‘बोल्ड एन्ड इन्टेलिजेन्ट’ महिलाकै सन्दर्भमा आउने शब्दावली हुन् । त्यसैले महिलाका बाहिरी (सौन्दर्य) होस् या भित्री (बौद्धिकता)का बारेमा संसारभरि नै गरमागरम बहस र विलास भइरहेकै छन् । बोल्ड व्यक्ति हो वा प्रवृत्ति ?
बलात्कारी आसारामलाई जन्मकैदको सजाय
नेपाली नेता र व्यापारीले मगाउन थाले विदेशबाट युवती ! 57 views